Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ)
ရေးသားသူ Hello Sayarwon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) ကဘာလဲ။
လက်ချောင်းတွေမှာပေါက်တဲ့ နာကျင်မှုကိုပေးတဲ့ အလွယ်တကူကူးစက်နိုင်တဲ့ အရေပြားရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ herpes simplex virus ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးအစား(၁) နဲ့ (၂)နှစ်မျိုးလုံးက ရေယုန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်ချောင်းမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန် ဗိုင်းရပ်စ်ပါတဲ့ခန္ဓါကိုယ်အရည်တွေနဲ့ ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ် မရွေး၊ လူမျိုး မရွေး၊ ကျားမ မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမှာတော့ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပါးစပ်တစ်ဝိုက် ရေယုန်ပိုးကူးခံထားရချိန်မှာ ကလေးက လက်ချောင်းတွေနဲ့လက်မကို စုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် အဓိကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမှာတော့ ရေယုန်ရှိတဲ့လူနာနဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေအတွက် အမျိုးအစား(၁)ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့လူတွေမှာတော့ အမျိုးအစား(၂)ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာကတော့ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သွားပြသင့်ပါတယ်။
Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
တံတောင်ဆစ်အနီး (သို့) ချိုင်းအောက်နေရာများတွင် ပြန်ရည်ကျိတ်များကြီးလာခြင်း
စူးနေသလို ခံစားရခြင်း သို့ အခြားပုံမှန်မဟုတ်သည်တို့ကို ခံစားရခြင်း
ဒီရောဂါဟာ သေသေချာချာ ဆေးကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင် အခြေအနေဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင့်မှာ အောက်ပါအချက်တွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ အရေးပေါ်ပြသသင့်ပါတယ်။
၃၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက် အဖျားကြီးခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ။
HSV-1 နဲ့ HSV-2လို့ခေါ်တဲ့ ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ် သို့ အခြားသူတွေရဲ့ ပိုးပါတဲ့ အရည်နဲ့ သင့်ရဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့လက်နဲ့ ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင်တော့ သင့် သို့ အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ HSVဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပါးစပ် (သို့) မျိုးပွားအင်္ဂါတွေမှာ ပေါက်နေတဲ့အနာကို ထိကိုင်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ။
HSV-1 နဲ့ HSV-2 ပိုး အကူးစက်ခံရခြင်း
HIV ပိုး အကူးစက်ခံရခြင်း
Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ။
စမ်းသပ်မှုတွေမပြုလုပ်ခင်မှာ သင့်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကမေးပါလိမ့်မယ်။ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်၊ မျိုးပွားအင်္ဂါစသဖြင့် သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ပေါက်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခင်နဲ့ ယခု အခြေအနေတွေကို မေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အခြေအနေက သိပ်ဆိုးနေပြီး ပြန်ပြန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သွေးနဲ့အရေပြားစစ်ဆေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခြင်းကြောင့် သင့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိနိုင်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Whitlow (လက်ရေယုန်အနာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ။
လတ်တလောမှာတော့ ရေယုန်ကိုပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်သေးပါဘူး။ ကုသမှုတွေ က အနာသက်သာရုံသာ ဦးတည်ထားပါတယ်။ acyclovir ဆေး 200mg တစ်နေ့၅ကြိမ် (သို့) 400mg တစ်နေ့သုံးကြိမ် ၅ရက်ကနေ တစ်ပတ်အထိသောက်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိခြင်း၊ အိမ်သာစနစ်တကျသုံးခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ခြင်း၊ အရက်နှင့်ဆေးလိပ်တို့ကိုရှောင်ခြင်း နှင့် ရေနွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းတို့က သင့်ကိုအနာအကျက်မြန်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လက်ရေယုန်နာကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် လက်ရေယုန်နာကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်အောင် နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အကာအကွယ်သုံးခြင်း (ကွန်ဒုံး)
အကယ်၍ သင့်မှာ မေးမြန်းလိုသော မေးခွန်းများရှိလျှင် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရရှိဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 2, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 12, 2017
http://www.skinsight.com/adult/herpeticWhitlow.htm. Accessed July 25, 2016.
Accessed July 25, 2016.
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/whitlow/001/. Accessed July
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ရတဲ့ ရောဂါတွေက ဘာတွေများလဲ…..
လိင်တံထိပ်မှာ အနာပေါက်နေတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။
အရေပြားပေါ်မှာဘာ့ကြောင့် အရည်ကြည်ဖုလေးတွေပေါက်ပြီး နီနေရတာလဲ။
ပါးစပ်ထဲအနာပေါက်နေတော့ စားချင်တာမစားရလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား